Uhamba njani usuka kwiJPG uye kwiLizwi: ezinye iindlela zokutshintsha ifomathi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uhamba njani ukusuka kwiJPG ukuya kwiLizwi
Iingcali zoyilo ziyazi ukuba ngamanye amaxesha kufuneka "badlale" ngeefomathi. Sithetha ngokudlulisela amaxwebhu kwiifoto, jpg kwigama, kwimifanekiso ukuya kwi-pdf ... kwaye uyikholelwe okanye hayi, kukho amaxesha apho unokujongana namathandabuzo, okanye ungazi ukuba loluphi olona khetho lufanelekileyo lokuguqula ifomathi enye ibe yenye.
Ke ngoko, kwesi sihlandlo, ukuba into oyifunayo kukusuka kwiJPG ukuya kwiLizwiSiza kukunceda ngokunikezela ngolwazi oludingayo kodwa kunye neenkqubo onokuziguqula ngokulula, nokuba unolwazi okanye awunalo.
1 Yintoni iJPG
2 Yintoni iLizwi
3 Iinkqubo eziza kusuka kwiJPG ziye kwiLizwi
3.1 Guqula iifayile zeJPG kwiLizwi kwi-Intanethi
3.2 Yiya kwiJPG uye kwiLizwi ngeenkqubo
3.2.1 IJPG kwiLizwi ngeZithombe
3.2.2 Khuphela iinkqubo zokugcina iJPG kwiLizwi
Ifomathi yeJPG lulwandiso lomfanekiso, oko kukuthi, ifoto oza kuyifumana kwikhompyuter yakho phantsi kwesiphelo -jpg. Igama elipheleleyo ngamaQela amaNgcali amaFoto aDibeneyo, kungoko ukwaziwa ngokuba yiJPEG.
Le fomathi Iphawuleka ngokucinezela imifanekiso ngokwaneleyo ukuze ingabinobunzima kakhulu (Ukuze ube nakho ukuyilayisha okanye uyikhuphele kwimizuzwana) kodwa ngaphandle kolu xinzelelo oluthetha ukuba umfanekiso uza kulahla umgangatho. Ngapha koko, ayenzi njalo, nangona ixesha lihamba kunye nokukhuphela kunye nokukhuphela loo mfanekiso, ilahleko encinci iya kuqatshelwa.
Okwangoku, iJPG yenye yezona zaziwa kakhulu kwi-Intanethi. Phantse yonke imifanekiso iyisebenzisa kuba yifomathi engaqhelekanga kakhulu kwaye isebenza kakuhle nakweyiphi na iwebhu kunye nesikhangeli. Nangona, okwangoku, ilahlekelwa ngumhlaba ngenxa yokuba ifomathi entsha ejolise kwiwebhu, iWebp, iqhuba kakuhle kakhulu. Nangona ingekamkelwa kwaye iifayile zewebhu azinakusetyenziswa kuzo zonke iindawo.
Ngokwenene, iLizwi yinkqubo. Sithetha ngeMicrosoft Word, inkqubo yokubhaliweyo edityaniswe kwiOfisi yeMicrosoft. Ngesi sizathu, yaziwa njengeLizwi leOfisi okanye njengeLizwi likaMicrosoft. Ukusukela ngo-1983 ibikho kwiikhompyuter zethu nangona namhlanje zininzi ezinye iindlela zasimahla zokuqwalaselwa (eziyizinto zazo).
Ke ngoko, into esiya kuyenza ngokwenene xa siguqula iJPG ibe yiLizwi kukuyidlulisela kuxwebhu lokubhaliweyo, ihlala ine-doc okanye i-docx extensions.
Olu xwebhu lolunye lwezona zisetyenziswa kakhulu, ngakumbi ukubhala isicatshulwa, nangona kunokwenziwa ukufakela imifanekiso okanye nokwenza amaxwebhu okubhaliweyo nawomfanekiso ngeefomathi ezithile (ngenxa yoko ukusetyenziswa kwayo).
Ngoku, kuya kufuneka uyazi ukuba xa usuka kwiJPG usiya eLizwini, awuhambi nyani usuka kwiJPG uye kwifomathi yeLizwi, kodwa uye kulwandiso lwe-doc (lolona luqhelekileyo). Kwaye ngaba eli Lizwi ligama lenkqubo, kodwa hayi ifayile ngokwayo. I-icon ebonakala kolu xwebhu ichaza ukuba olu xwebhu luvulwe ngeLizwi (okanye ngezinye iindlela ezinje ngeOpenOffice, iLibreOffice ...).
Iinkqubo eziza kusuka kwiJPG ziye kwiLizwi
Khawufane ucinge ukuba unomfanekiso. Inokuba nemizobo, imizekeliso, kodwa kunye nesicatshulwa. Kwaye kufuneka uyiguqule kwaye usebenzise yonke into ekuyo. Kodwa awunayo eyokuqala kwaye awunayo indlela yokuguqula jpg. Ngesi sizathu, abaninzi bakhetha ukufumana indlela yokuguqula ibe yinto abanokuyihlela, njengefayile yeLizwi. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba zeziphi ezinye iindlela onokuthi uguqule ngazo iJPG ibe yiLizwi? Sithetha ngabo.
Guqula iifayile zeJPG kwiLizwi kwi-Intanethi
Enye yeendlela zokuqala, ngakumbi ukuba usebenzisa i-injini yokukhangela ukusombulula ingxaki onayo, zezi amaphepha akwi-intanethi akunceda wenze olu tshintsho.
Le yeyona ndlela ilula kwaye ikhawulezayo yokwenza, enesibonelelo sokuba akuyomfuneko ukukhuphela nantoni na kwikhompyuter kwaye akufuneki ufake nantoni na. Ewe kunjalo, inengxaki yokuba uza kulayisha ulwazi olunokuba yimfihlo kuwebhu, kwaye uphulukane nolawulo lwento abaza kuyenza ngento oyilayishayo. Ngesi sizathu, abaninzi bakhetha ukungayihoyi le fomu.
Kodwa ukuba awukhathali, unokusebenzisa amaphepha ahlukeneyo ngaphandle kwengxaki. Ukongeza, indlela yayo yokusebenza ilula:
Ngenisa umfanekiso weJPG ofuna ukuwuguqula.
Inike ukuguqula ulinde imizuzu embalwa. Eminye into abayenzayo bayidlulisela ngqo kwiPDF kwaye ukusuka apho ukuya kuXwebhu.
Khuphela uguqulelo lwe-Doc esele luguquliwe.
Uninzi lwamaphepha lukunika ulwazi malunga nendlela abaziphatha ngayo iifayile ozilayishayo, ke ayizukuba ngumbono ombi, ngaphambi kokuguqula into "yabucala" okanye "ebalulekileyo", ukuthatha imizuzu embalwa ukuphonononga umgaqo-nkqubo wabo.
Kwaye ngawaphi amaphepha onokuwasebenzisa? Sikucebisa:
Yiya kwiJPG uye kwiLizwi ngeenkqubo
Olunye ukhetho kufuneka ugqithisele iJPG kwiLizwi iinkqubo ezifakwe kwikhompyuter yakho. Kule meko, kukho iindlela ezahlukeneyo onokuzisebenzisa, ezinye ezingafuneki nokuba zikhuphele kwaye zifake nantoni na.
IJPG kwiLizwi ngeZithombe
Ukuba unayo Windows 10, ngokuqinisekileyo unokukhetha "iifoto" kwimenyu yakho. Sisicelo esisetyenziswa yinkqubo ukuze ukwazi ukubona iifoto ezikwikhompyuter yakho, kodwa kunye nezo uzilayishayo kwifowuni yakho ephathekayo, ithebhulethi, njl. Ewe, ngale nto unokuguqula ifayile yomfanekiso ube ngumbhalo omnye.
Kufuneka wenze ntoni? Into yokuqala yokuvula umfanekiso kunye nale sicelo (ngokusebenzisa iifoto okanye iifoto).
Emva koko, betha iqhosha lokuprinta (unayo kwikona ephezulu ngasekunene). Oku kuyakwenza ukuba iphaneli yokushicilela isebenze kwikhompyuter yakho, kodwa asizukuyiprinta, kodwa siza kukucela ukuba ugcine le nto sifuna ukuyiprinta kwenye ifomathi.
Ukwenza oku, kuya kufuneka unike iMicrosoft Printa kwiPDF kwaye uyinikeze ukugcina njenge. Ubeka igama lefayile kunye nolwandiso .pdf kwaye ulinika ukugcina.
Ewe, okwangoku awunayo kwiLizwi, kodwa kwiPDF. Kodwa le fayile, eneqhosha elingasekunene, ungayicela ukuba iyivule ngeMicrosoft Word kwaye iya kuvula njengoko injalo. Ngapha koko, iLizwi liya kukuxelela ukuba kufuneka liguqule iPDF ibe kwifayile ye-doc. Uthi ewe kwaye, emva kwemizuzu embalwa, uya kuyilungisa.
Ewe kunjalo, kuya kufuneka ujonge ukuba yonke into ichanekile kuba ayinakusilela, inokuba neempazamo.
Khuphela iinkqubo zokugcina iJPG kwiLizwi
Ukuba uthanda fakela inkqubo ekhethekileyo yale njongo, Ungayenza, njengoko kukho iindlela ezininzi.
Ezinye zazo ziyi-PDF Element Pro, iJPG kwiLizwi Converter, iJPG kwiLizwi ...
Zonke zisebenza ngendlela efanayo. Kwaye, yakuba ifakiwe, Kuya kufuneka uvule umfanekiso kunye nabo (okanye ubeke indlela apho ikhoyo ifayile) kwaye uyinike ukuguqula kwifomathi yokubhaliweyo entsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amaqhinga » Uhamba njani ukusuka kwiJPG ukuya kwiLizwi
Indlela yokugudlisa imiphetho nge-Photoshop